musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Chizvarwa Chinotevera COVID-19
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Saudi Arabia Nhau • Kuputsa South Africa Nhau • Kuputsa US News • Canada Breaking News • Health News • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Dr. Garth vachitaura paWTN Inotevera Generation COVID-19 podcast
Rudzi rutsva rweiyo coronavirus - chizvarwa chinotevera COVID-19 - yakabuda uye inoitisa 70 muzana kuwedzera kwehutachiona muLondon chete. Yakarovawo muSouth Africa. IUK ikozvino yakasarudzika kubva kune yepasirese nyika, yakavharirwa kuti igare mukati memiganhu yayo. European Union (EU), Canada, Israel, neSaudi Arabia dzamisa dzendege dzese kuenda nekubva kuUK.
Mune podcast yazvino, iyo World Tourism Network (WTN) - chirongwa chitsva chakabuda mukuvaka zvakare. Hurukuro yekufamba iyo yakatanga kumashure munaKurume wegore rino apo COVID-19 yakave yechokwadi - inotaura nachiremba uye coronavirus nyanzvi pane zvaunotarisira.
Dr. Peter Tarlow vanobva kuSafer Tourism vakati kusvika panguva ino, isu takafunga kuti tave kutanga kuona mwenje kumagumo kwetaneru ne COVID-19, uyezve kamwe kamwe mumwe munhu akavhara mwenje.
Akatsanangura kuti panguva iyi podcast vachange vachitaura naDr Garth Morgan anova nyanzvi muzvirwere zvinopararira pamwe nenhengo yeTexas A&M University muMedicine. Kunyangwe hazvo zvese izvo zvisati zvazivikanwa nezve iyi nyowani nyowani, neruzivo uye hunyanzvi hwaDr Morgan, vanozoedza kutarisa mamiriro anoitika mune hurukuro ine musoro neruzivo rwunozivikanwa parizvino.
Tinofanira here kutya iyi nyowani nyonganiso? Zvine ngozi here? Isu tanga tichivimba kuti majekiseni aya aizove anoshanda, asi ikozvino, isu tinofanirwa kunge tiri mukutya maitiro kana kwete? Teerera kune podcast uye uwane.
World Tourism Network iri kuvhura mumwedzi waZvita kutanga kutanga muna Ndira 1, 2021. Panotove nezvikamu gumi nemaviri zvepano pasi rese kusvika pari zvino nemapoka enhaurirano pamusoro pezvinhu zvakasiyana. Mumwedzi wekutanga wekutanga, kwave kuine uye kucharamba kuine zvikamu zvinopa mukana wekuziva nhengo dzeWorld Tourism Network uye kutora chikamu nekuteerera hurukuro dzinonakidza dzekufamba nekushanya. Juergen Thomas Steinmetz, muvambi weWTN, akagovana kuti zviitiko izvi zvinogona kuve inotariswa nekuteererwa pano.
Kuti unyorese kumisangano iri kuuya, enda ku: https://wtn.travel/expo/
World Tourism Network (WTN) ndiro izwi rekare-risingapfuure remabhizimusi madiki-nepakati (maSME) muindasitiri yekushanya neyekushanya kutenderera pasirese. Nekubatanidza kuyedza, WTN inounza kumberi izvo zvido nezvishuwo zvemabhizimusi aya pamwe nevanobata navo Iyo network inopa izwi kune maSME pamisangano mikuru yekushanya pamwe neakakosha manetiweki kunhengo dzayo. Parizvino, WTN ine nhengo dzinopfuura chiuru munyika gumi nemaviri pasi rose. Chinangwa cheWTN ndechekubatsira maSME kupora mushure me COVID-1,000.